दुनियाँ – Page 99 – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
३१ असार २०७७, बुधबार १७:१९ English
प्यालेस्टाइन अधिनस्थ गाजामा इजरायली हमला, ८६ को मिर्त्यु ४ मंसिर २०६९, सोमबार २३:२०
बाल ठाकरेको निधन २ मंसिर २०६९, शनिबार २१:३१
काठमाडौं, २ मंसिर । भारतका कट्टर हिन्दुवादी नेता शिव सेनाका प्रमुख बाल ठाकरेको ८६ वर्षको उमेरमा शनिबार मुम्बईमा हृदयघातबाट निधन भएको छ । केही समयदेखि अस्वस्थताका कारण थलिएका ठाकरेको उपचार चलिरहेको थियो भने दुई दिनअघि मात्र उनको स्वास्थ्य सुध्रिन थालेको बताइएको थियो । बाल ठाकरेको..
गैरकानुनी आप्रवाशीहरुलाई छिट्टै ब्यबस्थित गरिने : राष्ट्रपति ओबामा १ मंसिर २०६९, शुक्रबार ०४:००
वासिंगटन, १ मंसिर । राष्ट्रपति बराक ओबामाले गैरकानुनी आप्रवाशीहरुलाई छिट्टै ब्यबस्थित गरिने बताएका छन् । दोश्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भए पछी पहिलो पल्ट ह्वाइट हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति बराक ओबामाले इमिग्रेशनसंग सम्बन्धित नीतिमा सुधार..
महात्मा गान्धीका नातिले जिते अमेरिकी चुनाब, भारतमा नक्कली गान्धी परिवारको ब्रह्म लुट २७ कार्तिक २०६९, सोमबार ०८:३२
वाशिंगटन, २७ कार्तिक । राजनीतिमा अहिंसाका प्रवर्दक स्वर्गीय महात्मा गान्धीका पनाति शान्ति गान्धीले अमेरिकाको कैन्सस राज्य सभा चुनाबमा विजय हाशिल गरेका छन् । कैन्सस राज्यसभा अन्तरगतको ५२ औं जिल्लामा गत ६ नोभेम्बरमा चुनाब भएको थियो । ७२ बर्षीय गान्धी रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवार..
म हिटलरको छिमेकी ! एउटा रोमान्चकारी सम्झना २५ कार्तिक २०६९, शनिबार १०:३६
काठमाडौं, २५ कार्तिक । एडगर फोएथवेंगरको बाल्यकाल म्यूनिखमा बित्यो जहाँ उनि हिटलरको छिमेकी थिए । उनि ९ नोभेम्बर १९३८ सम्मनै हिटलरको छिमेकी थिए । जुन रात जर्मन यहुदीको नरसंहार सुरु गरिएको थियो । समय बितेको पत्तो नहुने रहेछ, थाहै नपाई आठ दशक बितेछ, आज पनि एडगरको आँखामा एडल्फ हिटलरको..
राष्ट्रपति ओबामा बर्मा जाँदै २४ कार्तिक २०६९, शुक्रबार ०९:१७
एजेन्सी, २४ कात्तिक । अमरीकी राष्ट्रपति कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार उनको दोश्रो कार्यकालको पहिलो विदेश भ्रमण बर्मा बाट सुरु हुने भएको छ । बराक ओबामा बर्मा भ्रमण गर्ने पहिलो अमरीकी राष्ट्रपति हुनेछन । १७ नोवेम्बर देखि सुरु हुने यो भ्रमणमा उनले अंग सान सुची विपक्षी नेता र..
चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको १८ औं महाधिवेशन सुरु २३ कार्तिक २०६९, बिहीबार १६:०१
काठमाडौं, २३ कात्तिक । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को १८ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि सुरु भएको छ । उसको राष्ट्रिय महाधिवेशन बेइजिङमा रहेको ग्रेट हल अफ दि पिपुलमा हुँदै छ । महाधिवेशनलाई ध्यान दिँदै देशभर उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ । हरेक पाँच वर्षमा चिनियाँ कम्युनिस्ट..
अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा बराक ओबामा बिजयी २२ कार्तिक २०६९, बुधबार १०:०८
भर्जिनिया, २२ कात्तिक । भर्खरै सम्पन्न अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको प्राप्त पछिल्लो परिणाम अनुसार राष्ट्रपति बराक ओबामा २७० भन्दा बढी इलोक्ट्रोल भोट प्राप्त गरि दोश्रो कार्यकालको लागि बिजयी भएका छन् । अर्थतन्त्र प्रमुख एजेण्डा रहेको निर्वाचनमा ओबामाले कुल ५ सय ३८ इलेक्ट्रोरल..
कडा प्रतिष्पर्धा बीच अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्बाचनको मतदान हुदै २१ कार्तिक २०६९, मंगलवार २०:३९
भर्जिनिया, २१ कात्तिक । आज मंगलबार अमेरिकी जनताले राष्ट्रपति चयन गर्ने प्रक्रिया अन्तर्गत पुर्बी क्षेत्रका राज्यहरुमा बिहान ७ बजे देखि मतदान सुरु भएको छ । तर पूर्वी क्षत्रकै न्युयोर्कमा भने बिहान ६ बजे मतदान सुरु भै राति ९ बजे सम्म जारी रहने छ । राष्ट्रपति पदका दुवै उम्मेदबार..
स्यान्डीप्रभावित क्षेत्रमा अमेरीकी राष्ट्रपति ओबामा १८ कार्तिक २०६९, शनिबार ११:४८
न्युयोर्क : अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा आएको विनाशकारी समुद्री आँधी स्यान्डीले पुर्‍याएको क्षतिको निरीक्षण गर्न अमेरीकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा न्युजर्सी पुगेका छन् । त्यहाँ उनले स्थानीयसित आफ्नो प्रशासनले लामो समयसम्म उनीहरूलाई साथ दिइरहने बताए । भ्रमणमा रहेका ओबामालाई फेडेरल..
सेक्सको भन्दा सोसियल मिडियाको चाहना बढी प्रवल १६ कार्तिक २०६९, बिहीबार १६:३९
जर्मनीमा हालै गरिएको एक सोधले मानिसको चाहना सेक्समा भन्दा फेसबुक या टुवीटरजस्ता मिडियाको प्रयोगमा प्रवल बन्न पुगेको देखाएको छ । साइकोलोजिकल साइन्समा प्रकाशित विवरणअनुसार सोधमा २ सय ५ पुरुष र महिलामाथि सर्भेक्षण गरिएको थियो । तीमध्ये ज्यादाजसो व्यक्ति कलेजका छात्रछात्रा थिए ।..
काठमाडौं, १४ कात्तिक । कार पनि रकेटको गतिमा गुड्छ भन्दा पत्यार नलाग्ला । तर, बेलायती इन्जिनियरलाई रकेटको रफ्तारमा चल्ने कार निर्माणमा सफलता मिलेको छ । बिबिसिका अनुसारबेलायतका इन्जिनियरले रकेटको रफ्तारमा चल्ने हाइब्रिड कारको निर्माणमा सफलता पाएका छन् । रकेटको गतिमा चल्ने..